Umfutholuketshezi Cindezela, isiguquli samandla omoya, Isicefe Umshini - Hanrui
Onguchwepheshe ekukhiqizeni wokubacindezela, womoya, nezinye izinto zokusebenza
Imikhiqizo ekhiqizwe efektri yethu ithole isitifiketi sesikweletu ngekhwalithi
Ibeka njalo ikhwalithi endaweni yokuqala futhi igade ngokuqinile ikhwalithi yomkhiqizo wayo yonke inqubo.
Umkhiqizi onguchwepheshe weMikhiqizo ye-Hydraulic Press Air Products cishe iminyaka eyi-10.
isethi yokuthuthuka kwezimboni ukuthuthukiswa kohlelo nokukhiqizwa, ukuthuthukiswa komkhiqizo okuzenzakalelayo okungajwayelekile, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza njengenye yamabhizinisi ezobuchwepheshe.
ISuzhou Hanrui Electric Co., Ltd.isesiFundazweni saseJiangsu, idolobha elihle lamanzi eningizimu yoMfula iYangtze, elizungezwe iShanghai, iNanjing, iSuzhou Xichang nezinye izindawo ezisemadolobheni…
iqoqo lokuthuthuka nokukhiqizwa kohlelo lokuzenzekelayo kwezimboni, ukukhiqizwa komkhiqizo okuzenzakalelayo okungajwayelekile, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo ...
Wokucwebezelisa umshini ...
emakethe eJiangsu, Zhejiang, eShanghai, eYangtze River Delta, ePearl River Delta, evame ukusetshenziswa ekuhlolweni kwepayipi okufana nepayipi lensimbi elingenamthungo, ipayipi lensimbi engagqwali, ipayipi le-titanium alloy, ipayipi lethusi, ipayipi le-aluminium. Inkambiso yenkampani yethu enkulu ukukhiqiza umshini wokubacindezela ukunikezela ...
akunakubuyiselwa embonini yokucubungula ityhubhu, ikakhulukazi kufektri yama-boiler, ifektri yemishini yokupholisa, isimo somoya esisekela ifektri nezingxenye ze-auto. Isetshenziswa kakhulu kushubhu elingenamthungo njengethubhu yethusi, ishubhu le-aluminium, ithubhu ye-titanium, ishubhu le-nickel, ishubhu le-zirconium, ishubhu elingenamthungo, ...